News – Page 954 – Puntland Voice
Boqolaal ka tirsan ciidamada Xarakada Alshabaab kana yimid Gobolka Shabeelaha hoose oo Maanta Muqdisho ku soo fool leh
Tiro ciidamo ah oo la sheegay inay yihiin mutadawiciin kana yimid Gobolka Shabeelaha hoose ayaa Maanta Muqdisho ku soo fool leh kuwaasoo aad u hubeysan. Ciidamada oo tiro ahaan lagu qiyaasay ilaa 500 askari islamarkaana ku soo biirey Xarakada Alshabaab ayaa […]
Dagaaladii Muqdisho oo Saaka yara hakaday iyo duqeymo madaafiiiic oo socda.
Muqdisho (AB):-Magaalada Muqdisho ayaa saaka yara degan markii maalmihii la soo dhaafay uu xiriri uga socday dagaalo culus oo u dhexeeyay xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyo Dowlada KMG Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM. Xaafadaha Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag oo […]
Dagaalo xalay ka dhacay Isgoyska Ex.kontorool Afgooye
Muqdisho (AB):-Dagaalo waqti kooban qaatay ayaa xalay waqti danbe ka dhacay nawaaxiga isgoyska Ex kontorool Afgooye markii weerar lagu qaaday ciidamada Dowlada ee fariisinka ku leh halka dagaalku ka dhacay. Dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegaya […]
Maamulka la baxay Somaliland oo Maanta qabtay xabsin au taxaabay Xildhibaan ka tirsan Dowlada KMG Soomaaliya.
Boorame (AB):-Ciidamada Maamulka la baxay Somalilland ayaa Maanta magaalada Borame ka qabtay Xildhibaan ka tirsan Dowlada KMG Soomaaliya iyagoo islamarkiina xabsiga u taxaabay. Xildhibaanka la qabtay oo lagu magacaabo Cabdoow Shoobe ayaa la sheegay inuu ka soo jeedo Gobolada Waqooyi […]
Siyaaradii Caalimkii waynaa ee Macalin Axmad Shekh C/Raxmaan Celli oo South Afrika iyo Muqdisho lagu kala qabtay.
Macalin Sheekh C/raxmaan Celli oo ka mid ahaa Culimada Magaca wayn ku lahayd dalka Soomaaliya ayaa siyaaradiisa waxaa lagu qabtay South Afrika iyo Muqdisho, iyadoo sheekh Siyaaradiisa ay ka soo qeybgaleen Culimaa’udiin waa wayn ayaa waxay ahayd siyaaradii 13-aad oo […]
Ku simaha Gudoomiyaha Baarlamaanka Dowlada KMG oo sheegay magacyada xildhibaanadii shalay lagu laayay Magaalada Muqdisho
Muqdisho (AB):-Ku-simaha afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya, Mudane Abdiweli Sheeik Ibraahim Mudey, ayaa manta shaaca ka qaaday magacyada xubnihii baarlamaanka ee ku geeriyooday weerarkii ismiidaminta ahaa ee ka dhacay Hotel Muna oo ku yaalla Muqdisho. Xildhibaannada ku geeriyooday ismiidaaminta waxay kala yihiin: […]
Madaxweyne Shariif oo sheegay Saraakiil ka tirsan Ciidaamada Dowlada uu kala shirey sidii amaanka Xildhibaanada loo sugi lahaa.
Muqdisho (AB):-Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa mar kale ka hadlay dilalkii qorsheynaa ee shalay loo gaytay qaar ka mid ah xildhibaanada Dowlada KMG. Wuxuu sheegay Madaxweynuhu inuu saraakiil Dowlada ka tirsan uu kulan gaar ah kala yeeshay sidii […]
Dowladaha Mareykanka,Ingriiska iyo Hay'ada Qaramada Midoobey oo canbaareeyeen weerar lagu dilay Xildhibaano Soomaaliyeed
Warar siyaabo kala duwan uga soo kala baxcay Dowladha Mareykanka,Ingriiska iyo Hay’ada Qaramada Midoobey ayay ku canbaareeyeen weerar shalay Muqdisho ka dhacay kaasoo lagu dilay tiro Xildhibaano iyo saraakiil Dowlada KMG Soomaaliya ka tirsan. Vitalychurki oo ah Madaxa Qaramada Midoobey […]
Xildhibaan ka tirsanaa Dowlada KMG Soomaaliya oo is casilay
Mudane ka tirsanaa Baarlamaanka Dowlada KMG Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inuu iska casilay xubinimadiisii baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanka oo xiligaan ku sugan Dalka Norwey islamarkaana lagu magacaabo Cali C/laahi Xasan (Ganey) ayaa eedeyn u jeediyay Dowlada kMG Soomaaliya isagoo xusay […]
Afhayeenada Xarakada Alshabaab iyo Dowlada KMG oo ka hadlay dagaalada Muqdisho ka socda
Muqdisho (AB):-Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa xalay guulo ka sheegtay dagaaladii ka dhacay Muqdisho. Abuu Muscab waxaa uu sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii 24-kii saac ee la soo dhaafay isagoo tilmaamay inay fariisomo badan […]